Fedhiin cirrachaa attamiin lageen gogsaa jira? - BBC News Afaan Oromoo
Fedhiin cirrachaa attamiin lageen gogsaa jira?
Cirracha barbaacha yoo qotamu akkasiin qabeenya uumamaa kan biraa barbadeessa
Cirracha malee simiintoo yookin konkiriitii qabaachuun hin danda'amu. Afrikaa hundatti ijaarsaaf jecha qarqarrawwan lageenii qotamaa jiru. Kunis nageenya lageenii fi kanneen isarratti hundaa'aniif ilaalcha gadaanaa irraa kan kaa'e fakkaata, jedha Haariyet Konstaabil kan Keenyaatti argamu.
Gamoowwan bara durii hedduun waan isaan ijaaramaniif, jechi cirracha jedhu yaadannoo heedduu ni yaadachiisa. Cirrachi faaya haroowwan bareechuu dha. Waggoota kuma dhibba hedduu keessattis cirrachi xixinnoo, calaqisanii fi qaqalloon miliiyoonaa fi miliiyoona ta'an qilleensaan uumamaniiru. Amma garuu addunyaa hir'inni cirrachaa mudachaa jira.
Wantoonni manneen ittiin ijaaraman kan akka konkiriitii, daawwitii, fi bilookeetiin marti cirracha fayyadamuun hojjetamu. Haalli guddina baay'ina ummataa fi fedhiin misoomaa olaanaan, cirrachi bishaanitti aanuun qabeenya uumamaa baay'ee dhalli namaa itti dhimma bahe taasiseera.
Akka gabaasa mootummoota gamtoomaniitti, chirrachaa A.L.A bara 2012 keessaa qofa faayidaarra ole, darbii ol dheerinni fi bal'inni isaa meetira 27 ta'e ijaarsuu danda'a. Cirrachaan marfamuuf haroo bira dhaquu qofti nu hin barbaachisu, maagaaloota keenya gamoowwan gurguddoo tuullaa cirrachaa garuu konkiriittiitti geeddaramani dha.
Cirrachi ijaarsaaf hojiirra oolu gara caalu kan argamu qarqara lageeniifi garboota guddaarraayi. Cirrachi gammoojjii ijaarsaaf mijataadha. Piroojektonni Dubaay gurguddoonis hamma cirracha galaana gadi buusaa jira. Kanaafu magaalaa cirracharraan ijaaru irra amma meeshaalee ijaarsaa biyya Awustraaliyaatii fidaa jiru. Wanti nama dhibu, cirrachi meeshaa akkas gatii cimaan biyoota Arabaatti gurguramaa jiru ta'usaati.
Haala barbaacha cirrachaatiin wal qabateenis, badiinsa beeladaa, fi naannootiif sababa ta'usaatiin alatti, lubbu namoota irra miidhaa geessisaa jira.
Biyya Hindiitti, gareen maafiyaa dhoksaan cirracha dhiyeessu jalqabeera. Chaayinaattis haroon biyyatti guddaan, haroo Poyaang, sababa cirrachi keessaa guuramuuf gogaa jira. Namoonni dhibbaatamaan lakkaa'aman haroo sanarraa qurxummii baasuun jireenya isaanii kan ogganatan yoo ta'u, simbiroonni godaanan miliyoonnis waggaa waggaan achi boqotu ture.
Keenyaattis, qotiinsi cirrachaa qarqara lageen baadiyyaa akka Maakuweni fa'i keessatti hawaasa muraasni bishaan malee akka jiraatu saaxilee jira.
Tibba roobaa bishaan chirracha jala galuun walitti qabama. Booda waqtii bonaa hawaasni bishaan argachuuf cirracha qota
Waggoota 40 dhufan keessa lakkoofsi ummataa dachaan akka dabalu eegama. Kanaafu pirojaktoonni daandii kan akka daandii baabura Keenyaa keessaa barbaachisaa dha. Garuu, isaanis cirracha toonii miiliyoona hedduu barbaadu. Qarqarri garbaa fi lageen Keenyaa baay'een waggoota dhihoo keessa baay'ee hubamaniiru. Rakkoon Mawukeenii irra gahee garuu bayyee cimaa dha.
Cirrachi namoota muraasaaf jireenya yoo ta'u, kaaniif ammoo qarshiidha. Iddoowwan carraawwan hojii hin jirretti, namoonni abdii kutatan maal gochu danda'u kan jedhus waan gaariidha.
Qondaalli poolisii Maakuweni Joofriiy Kaasyooki namoota seeraan ala cirracha omishan dhorkuun hawaasa isaa biratti beekamaadha. Guraandhala bara 2011, gareen hin beekamne dhufee qabee, erga waraananii booda ajjeese.
Haati warraa isaa Ereen, gadda abbaa warraa isheerra teessee, ''namootni cirracha omishan 'ergaa nu dhaabu hin yaaliinaa' jedhu hawaasaaf dabarsuuf jecha isa kan ajjeesan," jettee jirti. Lapheen ishee ni dhahata yeroo dubbattu. Isheenis cirracha abbaan warraashee jalatti awwaalame xuxxuqxee.
Anii fi Antooniin yammuu qarqara lagaatiin dabarru, namooti aduu saafaa keessa cirracha baasuun konkolaataan hanga dhufe fe'atutti eegan agarre.
Ani yoo itti yaadu, cirrachi dhihootti yaadannoo ijoollummaa ta'aa laata sodaa jedhun qaba. Warreen kaan ammoo dhimma kana caala isaan yaaddessu qabu.
Daqiiqaa 50 dura
Kaardaashiyaaniifi West erga wal hiikanii booda ijoollee waliin guddisuuf waliigalan